Igama lesiqhelo: I-Tamsulosin (Tam soo LOE isono)
Igama lebrand: IFlomax
Udidi lweziyobisi: Arhente Antiadrenergic, esebenza peripherally
Ukuhlaziywa nguSophia Entringer, PharmD. Igqityelwe ukuhlaziywa nge-28 kaDisemba 2020.
I-Tamsulosin (i-Flomax) yi-alpha-blocker ebuyisa izihlunu kwi-Prostate kunye ne-bladder neck, yenza kube lula ukuchama.
I-Tamsulosin isetyenziselwa ukuphucula ukuchama emadodeni ane i-benign prostatic hyperplasia (ukwandisa iprostate).
I-Tamsulosin ayivunyelwanga yi-FDA ukuba isetyenziswe kubafazi okanye ebantwaneni.
Akufanele ulisebenzise eli chiza ukuba uxabisa i-tamsulosin. Musa ukuthatha i-tamsulosin kunye namanye amayeza afana ne-alfuzosin (Uroxatral), doxazosin (Cardura), prazosin (Minipress), silodosin (Rapaflo), okanye terazosin (Hytrin).
i-alka seltzer kunye nezalathiso zedosi
I-Tamsulosin inokubangela ukuba ube nesiyezi okanye utyhafe, ngakumbi xa uqala ukuyithatha okanye xa uqala ukuyithatha kwakhona. Qaphela ukuba uqhuba okanye wenza nantoni na efuna ukuba uqaphele. Gwema ukuma ixesha elide okanye ukugqithisa kakhulu ngexesha lokuzilolonga nakwimozulu eshushu. Gwema ukuphakama ngokukhawuleza kwindawo yokuhlala okanye yokulala, okanye unokuziva unesiyezi.
Ukuba uyeka ukuthatha eli yeza nangasiphi na isizathu, tsalela umnxeba ugqirha wakho ngaphambi kokuba uphinde uthathe kwakhona. Unokufuna uhlengahlengiso lwedosi.
I-Tamsulosin inokuchaphazela abafundi bakho ngexesha lotyando lwamehlo. Xelela ugqirha wamehlo ngaphambi kwexesha ukuba usebenzisa eli yeza. Sukuyeka ukusebenzisa i-tamsulosin ngaphambi kotyando ngaphandle kokuba ugqirha wakho uthe.
Zininzi ezinye iziyobisi ezinokusebenzisana neli yeza. Xelela ugqirha wakho ngawo onke amayeza owasebenzisayo.
Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yeyeza kunye nephakheji. Xelela umboneleli wakho ngamnye wezempilo malunga nazo zonke iimeko zakho zonyango, ii-aleji, nawo onke amayeza owasebenzisayo.
Akufanele usebenzise i-tamsulosin ukuba u-aleji kuyo. Musa ukuthatha i-tamsulosin kunye namayeza afanayo afana ne-alfuzosin (Uroxatral), doxazosin (Cardura), prazosin (Minipress), silodosin (Rapaflo), okanye terazosin (Hytrin).
Ukuqinisekisa ukuba i-tamsulosin ikhuselekile kuwe, xelela ugqirha wakho ukuba unayo:
I-allegra d ngokuchasene neclaritin d
imbali yomhlaza wedlala lobudoda;
uxinzelelo lwegazi oluphantsi; okanye
komzimba kumayeza sulfa.
Nangona eli liyeza lingasetyenziswanga kwabasetyhini, i-tamsulosin akulindeleke ukuba yenzakalise umntwana ongekazalwa. Ukuba ungumfazi usebenzisa eli yeza, xelela ugqirha wakho ukuba ukhulelwe okanye uncelisa.
Eli yeza alivunyelwanga ukuba lisetyenziswe nangubani na ongaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala.
Ndingayithatha njani i-tamsulosin?
Thatha i-tamsulosin kanye njengoko ibimiselwe wena. Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yakho kagqirha. Ugqirha wakho ngamanye amaxesha unokutshintsha idosi yakho ukuze uqiniseke ukuba ufumana iziphumo ezilungileyo. Musa ukulithatha eli yeza ngesixa esikhulu okanye esincinci okanye ixesha elide kunokuba kucetyisiwe.
I-Tamsulosin ihlala ithathwa kanye ngemini, malunga nemizuzu engama-30 emva kwesidlo. Zama ukuthatha la mayeza ngexesha elifanayo yonke imihla.
Musa ukutyumza, ukuhlafuna, okanye ukuvula iphilisi. Ginya ipilisi yonke.
I-Tamsulosin yehlisa uxinzelelo lwegazi kwaye inokubangela isiyezi okanye isiqaqa, ngakumbi xa uqala ukuyithatha, okanye xa uqala ukuyithatha kwakhona. Biza ugqirha wakho ukuba unesiyezi okanye uziva ngathi ungaphuma.
Ezinye izinto zinokubangela ukuba uxinzelelo lwegazi lube sezantsi kakhulu. Oku kubandakanya ukugabha, urhudo, ukubila kakhulu, isifo sentliziyo, idialysis, ukutya okunetyuwa encinci, okanye ukuthatha i-diuretics (iipilisi zamanzi). Tshela ugqirha wakho ukuba unesifo esingapheliyo esibangela urhudo okanye ukugabha.
Uxinzelelo lwegazi luya kufuna ukutshekishwa rhoqo. Kuya kufuneka ujongwe umhlaza wedlala lobudoda ngaphambi kunye nangexesha lonyango lwe-tamsulosin.
Unokuziva unesiyezi xa uqala ukuvuka. Lumka xa umile okanye uhleli phezulu kwindawo olele kuyo.
Ukuba uyeka ukuthatha i-tamsulosin ngaso nasiphi na isizathu, tsalela umnxeba ugqirha wakho ngaphambi kokuba uphinde uthathe kwakhona. Unokufuna uhlengahlengiso lwedosi.
Funda lonke ulwazi lwesigulana, izikhokelo zamayeza, kunye namaphepha emiyalelo oyinikiweyo. Buza ugqirha wakho okanye usokhemesti ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
I-Dose yesiqhelo yabantu abadala yeBenign Prostatic Hyperplasia:
I-54 543 yipilisi
Inqanaba lokuqala: 0.4 mg ngomlomo kanye ngemini
I-Dose ephezulu: 0.8 mg ngomlomo kanye ngemini
-Ukuba ukusetyenziswa kuyekisiwe okanye kuphazanyiswa kangangeentsuku ezininzi kwi-0.4 mg okanye kwi-0.8 mg yedosi, unyango kufuneka luqaliswe kwakhona nge-0.4 mg kanye ngethamo yosuku.
Sebenzisa: Unyango lweempawu kunye neempawu ze-benign prostatic hyperplasia (BPH)
Thatha idosi ephosiweyo ngokukhawuleza nje ukuba ukhumbule. Tsiba idosi ephosiweyo ukuba phantse ilixesha ledosi yakho ehleliweyo elandelayo. Musa ukuthatha amayeza ongezelelweyo ukwenza idosi ephosiweyo.
Ukuba uyaliphosa idosi yakho kwiintsuku ezininzi ngokulandelelana, qhagamshelana nogqirha wakho ngaphambi kokuba uqale kwakhona amayeza.
Yintoni ekufuneka uyiphephe
I-Tamsulosin inokuphazamisa ukucinga kwakho okanye indlela osabela ngayo. Qaphela ukuba uqhuba okanye wenza nantoni na efuna ukuba uqaphele. Gwema ukuphakama ngokukhawuleza kwindawo yokuhlala okanye yokulala, okanye unokuziva unesiyezi. Vuka kancinci kwaye uzinze ukuthintela ukuwa.
Ukuba nesiyezi okanye ukozela kakhulu kunokubangela ukuwa, iingozi okanye ukonzakala kakhulu.
Ukuthintela isiyezi, thintela ukuma ixesha elide okanye ukuba nobushushu ngexesha lokuzilolonga nakwimozulu eshushu.
Ukusela utywala kunokunyusa iziphumo ebezingalindelekanga ezithile zetamsulosin.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeTamsulosin
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo Iimpawu zokungabikho komzimba kwi-tamsulosin: urhashalala, irhashalala, ukurhawuzelela; ubunzima bokuphefumla; ukudumba kobuso bakho, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
Yeka ukusebenzisa eli yeza kwaye ubize ugqirha wakho kwangoko ukuba:
ukwakhiwa kwepenisi okubuhlungu okanye okuhlala iiyure ezi-4 okanye ngaphezulu; okanye
ukusabela okukrakra kwesikhumba - umkhuhlane, umqala obuhlungu, ukudumba ebusweni okanye kulwimi lwakho, ukutshisa emehlweni akho, iintlungu zolusu, kulandele ukuqubuka kolusu olubomvu okanye limfusa okusasazekayo (ngakumbi ebusweni okanye emzimbeni ongasentla) kwaye kubangela ukudumba nokuxobuka.
Iziphumo eziqhelekileyo ze-tamsulosin zinokubandakanya:
I-phenazopyridine iipilisi ezingama-200 mg
uxinzelelo lwegazi oluphantsi;
isiyezi, ukozela, ubuthathaka;
intloko ebuhlungu, iintlungu esifubeni;
ukuchama okungaqhelekanga, ukuncipha kwenani lobudoda;
umkhuhlane, ukugodola, iintlungu zomzimba, iimpawu zomkhuhlane;
ul 15 ipilisi etyheli
ukuvuza okanye impumlo ezixineneyo, iintlungu zesinus, umqala obuhlungu, ukukhohlela;
iingxaki zokulala (ukulala); okanye
ukuncipha komdla kwisini.
Olu ayilo luhlu olupheleleyo lweziphumo ebezingalindelekanga kwaye ezinye zinokwenzeka. Tshela ugqirha wakho malunga nayiphi na into engaqhelekanga okanye eneziphumo ebezingalindelekanga. Unokuxela iziphumo ebezingalindelekanga kwi-FDA ngo-1-800-FDA-1088.
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela itamsulosin?
Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza owasebenzisayo, kunye nalawo uwaqalayo okanye uyeke ukuwasebenzisa ngexesha lonyango lwakho, ngakumbi:
uxinzelelo lwegazi amayeza.
Olu luhlu alugqitywanga. Amanye amachiza anokusebenzisana ne-tamsulosin, kubandakanya amayeza kunye neyeza zokuthenga, iivithamini kunye neemveliso zamayeza. Ayilulo lonke unxibelelwano olunokwenzeka oludweliswe kwesi sikhokelo samayeza.
Khumbula, gcina oku kunye nawo onke amanye amayeza apho abantwana bangenakufikelela khona, ungaze wabelane nabanye ngamayeza akho, kwaye usebenzise i-tamsulosin kuphela kulwalathiso olumiselweyo.
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 8.01.
I-OP 10 (iOxycodone Hydrochloride eyongezelelweyo-Ukukhupha i-10 mg)
Ukwazi iiWayini zaseSpain kunye neMimandla
Cima kunye noVimba wokuGcina iMemori kwi-TI-84 yakho ye-Plus
Uzibeka njani izilumkiso zebhetri esezantsi kwiWindows 7 okanye kwiLaptop yeVista
Ungazitshintsha njani iimvume zeFayile usebenzisa iFayileZilla kwiSiza sakho seFTP
Ungayingenisa njani kwaye wabelane ngayo iModyuli yeSimulator Mod
MP 500 (Ketoconazole 200 mg)
Udlala njani iiVidiyo kunye neMidlalo yeTV ngaphakathi Windows 10
Uyisebenzisa kanjani iWindows Media Player ngaphakathi Windows 10
Ukwakhiwa kwenethiwekhi: Ukudibanisa isihlanganisi se-BNC kwiCoaxial Cable
pneumovax 23 iziphumo ebezingalindelekanga
iziphumo ebezingalindelekanga chantix
opana 10 milligram ukukhutshwa kwangoko
I pilisi emhlophe engqukuva 10 325
indlela yokubamba ukulele
I-norco 5/325 yexabiso iWalmart
Ndingathatha i-aleve kunye ne-lisinopril